BUDDHIST TERMS' Dictionary: DIVINE MESSENGER - ဒေ၀ဒူတ
DIVINE MESSENGER - ဒေ၀ဒူတ
DIVINE MESSENGER Devadῡta
ဒေ၀ဒူတ - ကောင်းမှုပြုရန် သတိပေးနေသော နတ်တမန်။
နတ်တမန်နှင့် တူသူများ၊ သေမင်းတမန်၊ သေမင်းတမန်နှင့် တူသူများ။
ကလေးငယ်၊ သူအို၊ သူနာ၊ သူသေ၊ အညှင်းဆဲခံ အကျဉ်းသား ငါးဦးတို့သည် သေမင်း၏ တမန်နှင့် တူကြကုန်၏။ ထိုငါးဦးတို့ကို တွေ့မြင်ရသောအခါ မိမိတို့လည်း သေကြရဦးမှာပါလား - ဟူသော သေခြင်းတရားကို ပြန်လည်သတိရတတ်ကုန်၏။ သေခြင်းတရားစသည်တို့ကို သတိရစေရန် ညွှန်ပြနေသည်နှင့် တူသောသူများ ဖြစ်ကြကုန်၏။
Divine messenger reminding one to do good deeds; people who are likeaDivine messenger; Messenger of Death; people who are likeamessenger of Death.
Infants, the aged, the sick,adead body and tormented prisoners are like messengers of death. On seeing those five, one is reminded of one’s own morality. They are like the ones reminding us of death, etc.